မြန်မာတွေရဲ့ ရွှေတိဂုံ လား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » မြန်မာတွေရဲ့ ရွှေတိဂုံ လား
မြန်မာတွေရဲ့ ရွှေတိဂုံ လား
Posted by koko on Sep 5, 2011 in Critic | 14 comments
ဖြစ်နေတွေ့နေတာတော့ကြာပါပြီ။ ဒါပေမယ့်အခုမှ ပြောဖြစ်တာပါ။ ပြီခဲ့တဲ့ စနေက နယ်က အမျိူးတွေ
ရောက်လို့ ဘုရားတွေလိုက်ပို့ပါတယ်။ နေ့လယ်၂ နာရီလောက် တော့မြန်မာပြည်ရဲ့ အထင်ရှားဆုံးရွှေတိ
ဂုံ ဘုရားကိုသွားဖူးပါတယ်။ အမျိူးတွေ ကလေးတွေနဲ့တပျော်တပါကြီးပေါ့ ။တောက်ဘက်မုဒ် က၀င်ဖြစ်
ပါတယ်။ ဓါတ်လှေခါး စီးမယ်ပေါ့။ကျွန်တော်က ကားပါကင်ထုိးနေလို့ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကရှေ့က
သွားကြပါတယ်။တောင်ဘက်မုဒ်က ၀င်ပေါက်နှစ်ခုရှိပါတယ။် တော်တော်များများသိကြမှာပါ။ ကျွန်
တော်တ်ို့ကတော့ဘေးပေါက်ဝင်နေကြပါ။ အရှေ့ပေါက်ကနိုင်ငံခြားသား နဲ့vip တွေပဲ ၀င်လို့ ရတယ် ထင်လို့ပါတယ်။ ကျွန်တော် အမျိုးတွေက ခတ်တည်တည်နဲ့ ရှေ့ပေါက်က၀င်သွားပါတယ်။
ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲ အလယ်ပေါက်လိုက်ဝင်သွားပါတယ်။ အ၀င်ဝ ကြတော့ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်က
လှမ်းမေးပါတယ် နိုင်ငံခြားသားပါလားတဲ့။ ကျွန်တောလဲမပါဘူးပေါ့ ။သူလဲဘာမှမပြောတော့ပါဘူး။
ဒါနဲ့အထဲဝင်သွားပါတယ်။ ဟိုဘက်ဘေးပေါက်မှာတော့ ကျွန်တော်တ်ို့ မြန်မာတွေ တိုးဝေ့ တန်းစီပြ်ီး
ဓာတ်လှေခါးထဲ ၀င်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။မြန်မာပြည်ကရွှေတ်ိဂုံ ဘုရားကို မြန်မာတွေ လာဖူးတာ
ဒီလိုပဲဖြစ်ရသလားဗျာ။အလယ်ပေါက်ကတော့ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း ပေါ့ ကြမ်းတွေဘာတွေလဲပြောင်
လို့ပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့န်ိုင်ငံခြားသိပ် မရောက်ဖူးတော့ သူများနိုင်ငံတွေ လဲ ဒီလို ပဲလား။
View all posts by koko →
သယ်….နင်ရော ဒေါ်လှ မလိုချင်ဘူးလား…..။
ကြည့်ရတာ.. ဂေါပကတွေလည်း.. “မစ္စတာမောင်ကျပ်” မကြိုက်ကြဖူးထင်တယ်..။
ပြောရရင်.. လူတွေလည်း.. ဘုရားပြလုပ်စားနေကြတာများလှပြီ..။
သေချာတာပေါ့ တော်တော်ကိုများနေပီ ကျိုက်ထိရိုးဆို သာလွန်ဆိုးပဲ ………..
ကျိုက်ထီးရိုးဆိုလို့ … ဘုရားလှူ ၊ လှေခါးလှူ၊ ရေအိုးတွေ ၊ ခေါင်းလောင်းတွေ ၊ ကျောက်ပြားတွေ … လှူ ထားတာတွေ ရှိသေးတယ်… ဟုတ်မဟုတ်သွားပြန်ကြည့်ရဦးမယ် … မဟုတ်လို့ကတော့ .. အင်ဗွိုက်ကိုင်ပြီး ကွိုင်သွားရှာလိုက်ဦးမယ် …ပြီးရင် ရွာထဲမှာ ပြန်ဖွမယ်..
ဟုတ်တယ်နော် နိုင်ငံခြားသားမှာခေါင်းဘယ်နှစ်လုံးများအပိုပါသလဲ မသိဘူး။ဘီလူးအနွယ်ဝင်တွေရှိပါတယ် ရွာထဲမှာ မေးကြည့်ဦးမှာပါ။
နေရာ အနှံ့ အဆင့်အတန်း ခွဲခြား နေကြလေတော့… မြင်နေတွေ့နေရတာ
ကျက်သရေ တုန်းပဗျာ…။ တန်းတူ အခွင့်အရေး က ဟိုး အဝေးကြီးမှာ.*…။
ခုကျတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံက စေတီတောင် တန်းတူမဖူးရပါကလားနော်
အက်ဖ်အီးစီမပါရင် မြန်မာငွေနဲ့ အလိုက်ပေးရတယ်
အိတုန်ေ၇ လှူ ပြီးရင်တော့ ရေစက်သာချလိုက်တော့ သူတို့ အပြစ်သူတို့ ခံလိမ်မယ်။တကယ် လှူ တာမလှူ
သူတို့အပိုင်း ပဲပေါ့နော်။ နို့မို့ဆို ကိုယ့် ပိုက်ဆံနဲ့ ကိုယ် အကုသိုလ် ရနေဦးမယ်။
အင်း .. ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ် … သို့သော် မတရားတာကို ဒီအတိုင်း ငြိမ်မခံချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ မို့ သိချင်မိတာ .. ။ သူတို့က ကျွန်မတို့ကိုလည်း အလှူခံတခြား လူတွေကိုလည်း အလှူခံဆိုလျှင် .. ဒါအလှူကိုဗန်းပြပြီး .. စီးပွားရှာသလို ဖြစ်နေတော့တာပေါ့ … ။ ပြောမဲ့သာ ပြောတာပါ … ကျိုက်ထီးရိုးတောင်ပေါ်တက်ရတဲ့ ကား လုတတ်ရတဲ့ ဒဏ်မုန်းလွန်းလို့ … မသွားဖြစ်ဘူး .. တနှစ်ကျော်ပြီ
ထောက်ခံတယ် အီတုံးရေ။ ကျိုက်ထီးရိုးတော့ သွားချင်ပါရဲ့။ ကားလုတက်ရတာ၊ တည်းခိုခန်းတွေ ဈေးအရမ်းကြီးတာနဲ့ ဒီနှစ်တောင် မသွားဖြစ်ဘူး။ ကိုယ်ကလည်း ပိတ်ရက်တွေချည်းပဲ သွားတာကိုး။
အဲ ဒါပေမယ့် မတူတဲ့အတွေးနဲ့ ရေးရမယ်ဆိုရင် ထိုင်းမှာလည်း မြဘုရားကို နိုင်ငံခြားသားတွေအတွက် ဝင်ပေါက်သပ်သပ် သူ့နိုင်ငံသားတွေအတွက် သပ်သပ်ထားတာပဲ။ ဒါမျိုးတွေက ရှိတတ်ပါတယ်။
မမရေ .. ကျိုက်ထီးရိုးကတော့ ဟယ်ရီကော်ပလာနဲ့ သွားလို့ရလျှင် သွားလိုက်ချင်ပါရဲ့ … အဲ့ဒီတောင်တက်ကားပေါ်တက်ရဖို့အရေး.. ကုတ်ဖဲ့ လုယှက်ပြီး တက်ရတာ .. အတော်ဆိုးတယ် … ။ ပြီးတော့လည်း … ထီးထိုးလျှင်သာ ပေါက်ချင်ပေါက်မယ် … ကားခေါင်းခန်းက စီးရဖို့ … နေရာမရဘူး …. နောက်ခန်းကလည်း .. သစ်သားတွေ တန်းထားတာ .. လူပိန်ပိန် တစ်ယောက်ထိုင်မယ်ဆိုလျှင်တောင် … ဒူးချိုးရတာ အဆင်မပြေဘူး.. သူများဖင်ကို ကိုယ့်ဒူးက သွားထိုးမိသလို ..ကိုယ့်ကိုလည်း နောက်ကလူက ဒူးနဲ့ ထိုးမိနေတယ် .. ဒီကြားထဲ ကားက ဟိုယိမ်း ဒီယိမ်း .. .နေကပူ .. အာ… တကယ့်ကို ဓါတ်ပေါက်တယ် …
ဟုတ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသား သီးသန့်အပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားက ပိုက်ဆံပေးရတယ်လေ…. မြန်မာတွေကတော့ ဖိနပ်တစ်ရံ ၅၀၊ ၁၀၀ နဲ့ အပ်ခထားခဲ့ရတာပဲရှိပါတယ်။
ကျိုက်ထီးရိုးကတော့ ပြောမဆုံးပေါင် တောသုံးထောင်ပဲ။ တချို့ဘုရားတွေဆို ၀င်ပြီးတောင် မဖူးရဲသလောက်။ အလှုခံမှ မဟုတ်ပဲ အေးဓမြတိုက်တာ။ ကျောက်ထပ်ကြီးဘက် သွားကြတော့ အငယ်မက မောလို့ ခဏ၀င်ထိုင်တာ အမ ရော့ရော့ ရေကပ်လိုက်၊ ပုဝါဆက်လိုက်ဆိုပြီး လာပေးတော့ ဘုမသိဘမသိ ပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်တယ်တဲ့။ ဘုရားဦးချပြီး ပြန်ထွက်မယ် လုပ်တော့မှ အမ (၇၀၀၀)ကျတယ် တောင်းလို့ ရန်ဖြစ်ရပြီး မကျေမနပ်နဲ့ ပေးခဲ့၇တယ်။ ဒေါသထွက်တာတော့ ပြောမနေပါနဲ့။ နောက် ဘုရားမှာ ဓါတ်ပုံရိုက်မလား အတင်းလိုက်မေးတာ၊ ကင်မရာခွံဆောင်ရတာတွေ မရှိသင့်တော့ဘူး။ ဒီမှာတော့ ဘယ်နေရာမှ ၀င်ကြေးမရှိဘူး။ နိုင်ငံသား ၊နိုင်ငံခြားသား အားလုံး အခွင့်အရေး အတူတူပဲ။
အုပ်ခဲပုံရွှေချမယ့်အစား ဆေးရုံဆောက်မယ်ကျောင်းဆောက်မယ် လုပ်ဒယ်
ဒို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ဘဘကြီး ဆင်ဖြူများရှင် ဘုရင့်နောင်အနော်ရထာ ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်
ဦးသန်းရွှေ သဒ္ဒါနဲ့ ပြုပြင်တဲ့အခါကြတုန်းကတော့
ရှေးဟောင်းအဆောက်အဦးတွေကိုဘာမှနားမလည်ဘဲ ဖျက်ဆီးပြစ်တယ် ဦးနှောက်မရှိဘူး